Ukubuza umbuzo kanjani ukuba abhapathizwe - ucabange ngalokhu, kungakhathaliseki ukuthi uyisebenzisa zavela kahle. Yini oyaziyo? Ukuze ufunde indlela yokwenza uphawu lwesiphambano, noma kanjani ukuba abhapathizwe? Sizozama ukucacisa kafushane izici ezimbili.
Okokuqala, sichaza kanjani ukuba abhapathizwe, okungukuthi ukubeka uphawu lwesiphambano. Uphawu lwesiphambano kuzo zonke izinkolo yobuKristu kuyinto ukucela kuNkulunkulu ukukhululwa ezonweni kanye pha emseni kaNkulunkulu. AmaKristu obu-Orthodox bakholelwa ukuthi uphawu lwesiphambano ivundile amandla anamandla. Futhi lo mbuzo, "kanjani ukuba abhapathizwe," omunye wabo waphendula: ". Kunjalo, futhi ngenhlonipho" Ngo-Orthodox wesimanje kahle ngemvume yesiphambano, kubalulekile ukuba ngokushelela ukuxhuma Inkomba, umunwe phakathi futhi isithupha kanye umunwe kancane futhi indandatho bezama entendeni yesandla sakho. Khona-ke kancane phakamisa iminwe yakho, isiphongo, ephansi kuya esiswini (kodwa hhayi esifubeni), kwase kuba kwabayishumi ehlombe langakwesokudla, ekugcineni, kwesobunxele. Ngesikhathi esifanayo hlabelela ngokwengqondo: "Esikhathini eGameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele, Amen."
Manje sibheke kanjani ukuba abhapathizwe ukuba ngibe umKristu.
Ake uqale nge yokuthi eSontweni Lobu-Orthodox wanquma ukubhapathiza izingane ngokushesha nje ngemva kokuzalwa. Uma ungakabhaphathizwa njengezinsana + ezisanda ubhapathizwe isikhulile: ubheke umpristi noma li yesonto obakhethayo. Bazakunazisa ngokuningiliziwe ngalokho futhi kanjani ukuze kahle ulungiselela ukwamukelwa of omunye amasakramente. Inkathi ngilungiselela ukuba ngibhapathizwe ngandlela esifushane, abanye - amade. Ngalesi sikhathi uzothola impendulo hhayi kuphela umbuzo kanjani ukuba abhapathizwe, ufunde imithetho yebandla impilo yobuKristu, ukufunda ukuthi baziphathe kanjani futhi uthandazele amanye ethempelini.
Ekhuluma uphawu lwesiphambano, asikwazi ukuthi lo muntu okukhulunywa ngaye zazivela ubudala lasendulo. Kusukela ezikhathini zasendulo, kwakubhekwa njengento Baningi abantu talisman enamandla. Abavubukuli ukulithola iqoqo lezinto kwezincwadi zenkolo zasendulo, ezakhiweni, izinto zasekhaya nemihlobiso. KumaKristu sekuyindlela lokholo lwawo, ngoba Kristu ngokufa kwakhe esiphambanweni walungcwelisa;.
Vera ivikela yona ibutho elikhulu uhlamvu kubonakala eqinisweni lokuthi abantu abaningi izingubo nezinye izinto ukuhlotshiswa ngendwangu efekethisiwe yisiphambano. A ubufakazi obucacile ukuthi - ugogo esekhona, ngisho prababushkiny amahembe ezifekethisiwe amathawula. Esikhathini sethu, efekethisiwe fashion futhi, eziningi kangaka nesithakazelo indlela embroider esiphambanweni.
cross Stitch amasu akuyona eyinkimbinkimbi kakhulu, futhi uyifinyelele ngaphansi amandla ngisho nengane. efekethisiwe ngamunye engu- siqukethe ezimbili yaseZimbabwe alinganayo sobude polukrestikov - omunye esitshekile kuya kwesokudla, kwesibili - kwesokunxele, begcwalisa isikwele lephethini ensimini. Cross Thunga libhekisela uhlobo letibalekako, okusho needlewoman kwenza okungaka yaseZimbabwe luhamba luye ohlangothini olulodwa njengoba kudingekile ukwenza isithombe noma umhlobiso, bese ithungela kubo ligamanxa emthambekeni okuphambene. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi zonke zezikhulu engenhla yaseZimbabwe abangu esitshekile nganxanye. Khona-ke efekethisiwe ubukeka bushelelezi futhi zibukeke, kodwa ephukile umbala ukufana ne multicolor design.
Njengoba kahle amasu kulo msebenzi, uyobona kalula baqonde, indlela embroider isikimu esiphambanweni. Phela, kuye wonke X lisho isikwele elihambisana umbala noma uphawu. Bala iziphambano eziningi kanjani nangebala ilandelana, embroider kubo ku-canvas. Khona-ke ukuthuthela lomzila wesibili, ukubala bonyana mangaki iziphambano kumelwe siphumele uhlangothi noma omunye. Futhi eligoqiwe indwangu efekethisiwe.
Indlela ukulungiselela ginger bhisikidi